Cumar Finish oo laamaha amniga ka dalbaday iney furan wadooyinka xiran – Somali Top News
Farmaajo oo daah-furay wajiga Labaad manhajka dugsiyada dalka
IOM Signs New Cooperation Agreement with Somalia
Dani iyo wasiirka Maaliyadda Itoobiya oo kawada hadlay iskaashi cusub
Cuduro ka dhashay fatahaadda Wabiga Shabelle
Amniga madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyay
Cumar Finish oo laamaha amniga ka dalbaday iney furan wadooyinka xiran
August 31, 2019 Somali Top News	0 Comments Cumar Finish oo laamaha amniga ka dalbaday iney furan wadooyinka xiran
Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdsho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa Taliska Booliska Soomaaliyeed ka dalbaday in ay furan Wadooyinka Xiran ee Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Cumar Filish oo kaqayb galayay munaasabadda uu xilka kula wareegayay Taliyha cusub ee Ciidanka Booliska soomaliyeed ayaa waxa u kacodsaday Taliska Ciidanka booliska in ay furaan wadooyinka muqdisho ee xeran.
Cumar Finish ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ay dhib badan ku qabaan wadooyinka Xiran isaga taliska ka dalbaday in ay si deg deg ah u furaan.
Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sidokale waxa uu shacabka kadalbaday in ay lashaqeeyaan ciidamda amaanka si looga horta waxa uu ugu yeeray nabad diidka.
Taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya oo maanta Xilka la wareegay Cabdi Xasan Xijaar oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in isiga iyo Gudoomiyaha Cusub ay qaadi doonaan Dhagxaan ku xiran wadooyinka Magaalada Muqdisho
Habeen kahor ayay aheed markii Gudoomiyaha Cusub uu Xil la wareegay waxa uuna sheegay in uu si deg deg ah u firidoono wadooyinka Xiran ee Magaalada Muqdisho.
← Update: Protests against Somali federal government in Kismayo
African Union troops deployed in central Somalia town →
Kooxo hubeysan oo magaalada Jowhar ku dilay sarkaal katirsanaa ciidanka dowladda
August 18, 2019 Somali Top News 0
Ciidamada amniga oo qabtay Rag qaraxyo diyaarinayay
July 29, 2019 Somali Top News 0
Soomaalida ku nool Mareykanka oo ku ciiday Garoonka weyn US Banka Stadium
August 22, 2018 Somali Top News 0